Mudzidzi MuWheelchair Anorova Zvakabatwa Zvakabatwa paVhidhiyo
Redhanded: Vhidhiyo Inoratidza Brutal Kurova kweMudzidzi MuWheelchair
Posted on Dai 30, 2014 November 20, 2020 by csr 1687
Mhuri yemudzidzi weCalifornia ane makore 17 okuberekwa ari kuda kururamisirwa. Izvi zvinouya mushure mevhidhiyo inokatyamadza yemudzidzi mune wiricheya kurohwa zvine utsinye kwakaburitswa nedunhu rechikoro.
Nekuda kweizvozvo, Oakland High Chikoro mudzidzi Francisco Martinez akadzokera kuChipatara cheVana mu Oakland China manheru. Mushure mekurohwa, Francisco akakumbira vanachiremba kuti vabatsirwe kugadzirisa kurwadziwa kwakanyanya kwaave kusangana nako.
“Akandirova mbama. Akandirova zvakanyanya, zvakandikanda pachigaro changu. Ndakarova pasi nechirebvu kutanga. Ndanga ndine vanga pano, ”akadaro Martinez, achinongedzera nzvimbo iri pamusoro pehuro pake.
KTVU yakawana vhidhiyo yekucherechedza kubva kuOakland Unified School Dunhu. Izvi zvinoratidza mukuru achirova anemakore gumi nemanomwe anodiwa Francisco paOakland High School kuma17 mangwanani neMuvhuro Chivabvu 9.
YouTube Inoburitsa Ndeapi maInternet Provider Ari Nani Pakushambadzira
Yechipiri Vhidhiyo Inoratidza Mumwe Kutorerwa Kwevadzidzi MuWheelchair